"नयाँ पुस्ताको चासो": आलुवाद
"नयाँ पुस्ताको चासो"
संप्रस पौडेलको यस ब्लगमा तपाईँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ । कथा‚ कविता‚ गजल तथा हास्यव्यंग्यात्मक लेखरचना‚ विभिन्न फोटो‚ लोकसेवा सामग्री तथा मनमा लागेका विभिन्न भावनाहरुलाई एकै झमेटमा अध्ययन गर्न सकिने यो ब्लग तपाईँहरुकै लागि तयार गरिएको हो । कृपया ब्लग भिजिट गरेपछि कमेन्ट पनि गर्नुहोला है ।
फेसबुकमा भेट्नुहोला है । Sampras Paudel
कम्प्युटर गुरु (3) कार्टुन (2) खत्र्याकखुत्रुक (13) गीत/गजल/कविता (19) तस्विरहरु (1) यात्रा संस्मरण (1) लोकसेवा तयारी (10) हास्य व्यंग्य (54)
- संप्रस पौडेल दिवस
घरजग्गाको भाउ दलालीको हातमा छ । एउटै जग्गा पचास पटक बेचाउँने दलालीहरु छन् । तिनीहरुले राज्यलाई कर तिरेका छन् ? पक्कै छैनन् । एउटा जग्गा बेचेर आएको कमिशनले गाडी चढेर हिँड्ने दलालीहरु तपाईँका छिमेकमा कत्ति छन् कत्ति । जे हुन नहुने हो‚ त्यै हो आलुवाद ।
डिग्री पास गरेको कर्मचारीको तलब २० हजार र उत्तिकै योग्यताको सिइओले २० लाख कमाउँछ । वृद्ध वृद्धाले रोइरोइ कृषी सम्हालेका छन्, युवाहरु विदेशमा पसिना बेच्दैछन् । नेताहरु डलरमा इज्जत बेच्दैछन् । जे नहुनुपर्ने हो त्यै भैराछ । यै हो आलुवाद ।
व्यापारीले किसानसँग उब्जनी किन्छन्, मनलाग्दी मूल्य राख्छन्, दोब्बर तेब्बर र चौब्बरभन्दा बढीमा बेच्छन् । पाँच रुपियाँ किलोको आलु लिएर कोल्ड स्टोरमा ८ महिना राखेपछि पचास रुपियाँमा बेच्न पाइन्छ । यै हो आलुवादको गाँठीतन्त्र ।
यतिसम्म कि व्यापारी कानून बनाउँछन्, जनता खुरुखुरु मान्छन्, सरकारलाई पनि आलुवाद फापेकै छ । बीउ के रोपियो र कस्तो रोपियोसँग सम्बन्ध हुँदैन । वादको मात्रै कुरा हुन्छ । फलिफापको मात्रै कुरा हुन्छ । त्यै हो आलुवाद ।
एउटाले मार्क्सवाद रोप्यो उपलब्धीमा आलु नै फल्यो । अर्कोले माओवाद फल्यो अन्तत आलुकै शरणमा पौनेटो भएर बस्नुपर्‍यो । सबै मिलेर विधि विधानका साथ समाजवाद रोपेको आलुवाद हौसिएको तपाईँहामी सबैले देखेकै हो । आलुवादका पारखीहरुलाई मार्क्सवाद, माओवाद, लेलिनवाद, समाजवाद केही पनि फाप्दैन । हामीलाई हाम्रो आलुवाद खुबै प्यारो छ ।
इतिहासमा कालुवाद, प्रेममा मायालुवाद, बिहारमा लालुवाद र कपालका लागि तालुवाद चल्छ । ताछेको आलु र खुइलिएको तालुमा के भिन्नता छ र ? यसैले तालु हाम्रो बौद्धिकता नाप्ने कशी र आलु हाम्रो नाङ्गो राष्ट्रियताको दशी हो । सार्वभौमिकता त खोक्रा नारा हुन् । आलुवादको भाषण नै हाम्रा प्रतिफल हुन् । आलुवाद आलुवादै हुन्, सफल हुन् कि असफल हुन् । बरु पास ठालुवाद हो भने फेल आलुवाद हो भन्न सकिन्छ ।
मास्टरसाप आलुलाई गोलभेँडा बनाउन खोज्छन् । आलुले कहिल्यै गोलभेँडाको ल्याकत राख्दैन । आलुलाई आलु नै रहन दिनोस् । आलुको वंशनाश गर्ने प्रयत्न नगर्नोस् । यै हो आलुवादको गुदी ।
गुन्द्रुकमा आलु‚ काउलीमा आलु‚ अचारमा आलु‚ आलुमा आलु । आलु नै सर्वमान्य ठालु हो । भैरव अर्यालले त आलुवादलाई ठालूवाद माने । तपाईँ हाम्ले किन नमान्ने ? हाम्रा नेता आलु हुन्‚ तिनका कार्यकर्ता आलु हुन्‚ मास्टर आलु हुन्‚ विद्यार्थी आलु हुन्‚ डाक्‍टर आलु हुन्‚ बिरामी आलु हुन् । तराईदेखि हिमालसम्म फल्ने कुनै बीउ छ भने त्यो आलु नै हो ।
इतिहासमा आलुलाई दौरासुरुवाल वा सारीचोलोमा सजाइयो । विगतमा आलुलाई कोटपाइन्ट र सर्टपाइन्टमा सजाइयो । आलुलाई विदेश पुर्‍याएर बेइज्जत गरिन्छ‚ कहिले टुँडिखेल र रत्नपार्कमा नाङ्गेझार पारिन्छ । कहिले बानेश्वरतिर कहिले हानेश्वरतिर‚ बिहान थानेश्वरतिर‚ बेलुकी तानेश्वरतिर पुर्‍याएर आलुको धर्म परिवर्तन गराइयो । भो अब अति भो‚ आलुलाई आलुबाहेकका वादबाट स्वतन्त्र गरियोस् । आलु छुट्टै सिद्धान्त हो‚ आलु आफैंमा आदि र अन्त हो । बिग्रे पनि बिगारे पनि आलु नै आलु हो । सप्रे पनि सपारे पनि आलु आलु नै हो । यसैले एकस्वरमा भनौं "आलुवाद जिन्दावाद !"
समकालीन साहित्य डट कममा पोष्ट भएको ।
प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 20 श्रावण, 2074
यस वेबसाइटमा पोस्ट भएका लेखकका अन्य रचनाहरु
दलिय फाइदा र साँढेजात्रा
कलिउडको जात्रा, तिघ्राको व्यापार
Posted by Sampras Paudel at 5:46 PM
You can leaveacomment here:
- संप्रस 'दिवस'
यस ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ । कृपया प्रतिक्रिया पनि जनाउँनु होस् है ।
Take our online testलोकसेवा अनलाइन परीक्षा
पत्रपत्रिका र खबर
लोकसेवा सम्बन्धी विविध सामग्री
साथीहरुका सल्लाह सुझाव र सम्बन्धित विषयका व्यक्तित्वहरुको सहयोगमा ब्लगर संप्रस पौडेल द्वारा विगतमा लोकसेवाका विविध तहका परीक्षामा सयौं...
युगले नचिनेको दार्शनिक : रुपचन्द्र विष्ट
युगले नचिनेको दार्शनिक : रुपचन्द्र विष्ट बि.सं. १९९० पौष २६-२०५६ “केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग...
फुटबल खेलको शुरुवात ग्रीसबाट होइन‚ नेपालबाट भएको खुलासा
ऐतिहासिक आधारहरुः * फुटबल र बुटवल झण्डै झण्डै मिल्दाजुल्ला छन् । * यस्तै बाह्रखरीमा 'फ' र 'ब' एकअर्का छिमेकी...
फेसबुक पार्टी पहिला पहिला “कपुरी क” सिक्नु पर्दा भनिन्थ्यो, गोलो गोलो अण्डा पुलिसको डण्डा, हनुमानको पुच्छर, रामको जुँगा । आजकल बच्चा...
पाँच व्यंग्य लेखहरु (five satires)
गाइजात्रामय गाइजात्रा – संप्रस पौडेल “दिवस” उहिले उहिले बर्षमा एक दिन मनाइने गाइजात्राको धेरै महत्व थियो । सबैजना त्यही दिन ...
Nepali calendar ..........
कृपया यहाँ पोष्ट गरिएका सामग्रीहरु अन्यत्र प्रयोग गर्दा श्रोत खुलाउनुहोला ।. Simple theme. Powered by Blogger.